Waddada jamhuuriyadda: Barbados waxay dooratay madaxweynihii ugu horreeyay ee abid
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Barbados News Breaking » Waddada jamhuuriyadda: Barbados waxay dooratay madaxweynihii ugu horreeyay ee abid
Barbados News Breaking • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caribbean • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • News • Dadka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka UK
Dame Sandra Mason, oo ah guddoomiyaha guud ee hadda, ayaa markii ugu horreysay loo doortay Madaxweynaha Barbados.
Tallaabadani waxay ka dhigaysaa Barbados, oo ah waddan yar oo soo koraya, inuu yahay ciyaartoy si sharci ah ugu jira siyaasadda adduunka, laakiin wuxuu kaloo u adeegi karaa “tallaabo midayn iyo qaranimo” ah oo laga yaabo inay ka faa'iideysato hoggaankeeda hadda ee guriga.
Dame Sandra Mason, oo hadda ah guddoomiyaha guud, ayaa loo doortay Madaxweynaha Barbados.
Baaqyada loogu talagalay madaxbannaanida buuxda ee Barbados iyo hoggaanka guriga ku soo kordhay sannadihii la soo dhaafay.
Mason ayaa la dhaarin doonaa 30 -ka Nofeembar, oo ah sannad -guuradii 55 -aad ee ka soo wareegtay markii ay xornimada ka qaateen UK.
Tallaabo muhiim ah oo ku wajahan daadinta gumaysigii jasiiradda Kariibiyaanka, gumaysigii hore ee Ingiriiska Barbados waxay beddeli doontaa Elizabeth II, Boqoradda Boqortooyada Ingiriiska iyo 15 kale oo ka tirsan Barwaaqo -sooranka, iyadoo Madaxweynaha cusub loo doortay inuu noqdo madaxa dawladda, waxayna noqon doontaa jamhuuriyad.
Dame Sandra Mason, oo ah guddoomiyaha guud ee gobolka, ayaa goor dambe oo Arbacadii ah loo doortay cod saddex meelood laba meel kalfadhigii wadajirka ahaa ee Golaha Baarlamaanka iyo Guurtida ee dalka, taas oo ah tallaabo muhiim ah, ayay dawladdu ku sheegtay bayaan ay soo saartay, “waddada Jamhuuriyadda ”.
Gumaysigii hore ee Ingiriiska ee xornimada ka qaatay Boqortooyada Ingiriiska 1966 -kii, ummaddii wax ka yar 300,000 waxay xiriir dheer la lahayd boqortooyada Ingiriiska. Laakiin wicitaannada gobannimo -doonka buuxa iyo hoggaanka dalka ku soo kordhay ayaa kor u kacay sannadihii la soo dhaafay.
Mason, oo 72 jir ah, ayaa la dhaarin doonaa 30 -ka Nofembar, oo ah sannad -guuradii 55 -aad ee ka soo wareegtay markii ay xorriyadda ka qaateen Boqortooyada Ingiriiska. Sharci yaqaan hore oo soo noqday guddoomiyaha guud ee jasiiradda tan iyo 2018, waxay sidoo kale ahayd haweeneydii ugu horreysay ee ka shaqeysa Maxkamadda Rafcaanka Barbados.
Barbados Raiisel wasaare Mia Mottley ayaa doorashada madaxweynaha ku tilmaamtay "daqiiqad muhiim ah" ee safarka dalka.
Mottley ayaa sheegay in go’aanka dalka ee ah inuu noqdo jamhuuriyad uusan ahayn cambaareyn waayihii Ingiriiska.
Doorashadu waxay ka faa'iideysan kartaa Barbados dal iyo dibadba.
Guuritaanka ayaa sameeya Barbados, dal yar oo soo koraya, si sharci ah ugu jira siyaasadda caalamka, laakiin wuxuu kaloo u adeegi karaa “dhaqaajin mideyn iyo qaranimo” oo laga yaabo inay ka faa'iideysato hoggaankeeda hadda ee guriga.
Barbados waxaa sheegatay Ingiriiska 1625. Mararka qaarkood waxaa loogu yeeraa “Little England” daacadnimadeeda caadooyinka Ingiriiska.
Waa meel loo dalxiis tago oo caan ah; ka hor masiibada COVID-19, in kabadan hal milyan oo dalxiisayaal ah ayaa booqday xeebaheeda aan fiicnayn iyo biyo cad-cad.